बाह्र बजेर पैँतीस मिनेट जाँदा « रिपोर्टर्स नेपाल
किशोर पहाडी : निद्रामै उसले अनुभव ग¥यो– उसको पैतालामा कुनै चिसो स्पर्श भएको छ । ऊ झसङ्ग भयो । आँखा खुल्यो उसको ।
कोठाले अन्धकारको कालो गलबन्दी बेरेको थियो र कोठामा लास गन्हाएजत्तिकै कुनै दुर्गन्ध फैलिरहेको थियो। एकछिनपछि उसले आफ्नो त्यो कोठामा अर्कै कोही भएको महसुस पनि ग¥यो। खत्राकखुत्रुक… केही आवाज आयो । चोर हो कि ? उसले सक्दो स्तरको अनुमान गर्यो ।
एकछिनमै कोठाबाट लासको गन्ध स्वतः हरायो। अनि उसले कोठाको बत्ती बाल्यो। तर कोठामा कोही थिएन । चोर आएको कुनै आभास पनि थिएन । यसो चारैतिर हे¥यो । भित्तामा उसका मृत पिताज्यूको फोटो देख्यो, जुन फोटोमा हिजोसम्म मुसुमुसु हाँसिरहेका उसका पिताज्यू अहिले गम्भीर मुद्रामा थिए ।
ऊ नजानिँदो आश्चर्यले जुरुक्क उठ्यो र फोटोनजिकै गयो। फोटोमा उसका पिताज्यू साँच्चीकै गम्भीर मुद्रामा थिए । उसले वर्षौदेखि देख्दै आएको त्यो फोटोमा उसका पिताज्यू हाँसिरहेको मुद्रामा हुनुपर्ने हो। यो के भएको ? … ऊ अलमलमा प¥यो। … सपना हो कि बिपना छुट्टयाउन सकेन । यसो ओछ्यानतिर हे¥यो– ऊ त्यहाँ सुतिरहेको थिएन । मतलब, त्यो बिपनै थियो सपना थिएन ।
त्यो उसका पिताज्यूको स्वर थियो। उसले राम्ररी चिन्यो त्यो स्वर । तर उसका पिताज्यू स्वर्गे भएको सात वर्ष भइसकेको थियो र अहिले रातको ठीक बाह्र पैँतीस बजेको थियो। फोटोमा भएको भावपरिवर्तन र यो मृत व्यक्तिको स्वर । … के भएको ? उसले बुझ्न सकेन । अनायासै उसको मुखबाट निक्लिहालेछ, “बुबा !”
“तैले ठीक काम गरिनस्, विपिन । मलाई थाहा छ … म मरेपछि मेरो अफिसबाट आएको पैसाले तैँले मोटरसाइकल किनिस् । यो राम्रो काम होइन । मलाई थाहा छ … तैले मेरो पैसाबाट एक पैसा पनि आमालाई दिइनस् । मलाई सब थाहा छ, विपिन ! मलाई सब थाहा छ ।”
“यी सब मैले गरेका कुराहरू तँलाई मन पर्दैन होला सायद । तर तैँले जे काम गरिस्, त्यो पनि त मलाई मन परिरहेको छैन । … मेरो सञ्चयकोषबाट आएको पैसा, मेरो सञ्चित विदाबाट आएको पैसा, मेरो परिश्रमको पैसालाई तैँले आफ्नो सुविधाको निम्ति किन खर्च गरिस् ?
तैँले आफ्नी स्वास्नी र छोरालाई त्यही पैसाको बहुमूल्य लुगाहरू किनिदिइस् । तर आमालाई वास्तै गरिनस् । अहिले पनि सुन् त … उता कोठामा शोभा खोक्दैछे । रोगी आमालाई औषधी ल्याउनु पर्दैन ? डाक्टर जँचाउनु पर्दैन ?”
ऊ एकदम अलमलमा पर्यो ।
ऊ फेरि अलमलमा पर्यो ।
उसले घडी हेर्यो– बाह्रबजेर पैँतीस मिनट गएको थियो ।
“कृष्णेसँग पनि एकसय उन्नाइस रुपैयाँ लिन बाँकी छ । लिइस् ? हरिमानदाइ छन् नि … पच्चीस सय रुपैयाँ मैले उनीसँग घर बनाउन सापट लिएको थिएँ, तिरिदे ।”
“पछाडिको बारी किन बाँझो राखेको नि ? मैले रोपेको हलुवाबेदको बोट पनि काटिछस् । घर छेकियो भनेर हो ? … त्यो बारी बाँझो नराख्, विपिन । त्यहाँ आलु र मकै रोप् । आलु एकदम सप्रन्छ त्यहाँ । … अगाडिको फूलबारीका फूलहरू पनि सुकेका मात्र छन् । बेलाबेलामा पानी हाल्दै गर्नुपर्छ । किन विपिन ? के तँलाई वसन्त आएको मन पर्दैन ?”
ऊ त्रासले थररर्र … काँप्यो ।
“भैगो। जाँडरक्सी खा । चरेस र म्यान्डेक्स पनि खा । आमालाई कुनै औषधी नख्वा । तँ आफू मात्रै धेरै ठूलो मान्छे बन् । आफ्नी स्वास्नीको मात्र राम्रो हेरचाह गर् । बूढी आमा… मार् तेरी बूढी आमालाई । तँ धेरै ठूलो मान्छे बन् विपिन ! धेरै ठूलो मान्छे ।”